Sacuudiga oo markii ugu horreysay dumarka u qabtay tartanka baaskiilka | ogaden24
Tartankaan oo 10 kiilo mitir ahaa ayaa waxaa ka soo qeyb galay 47 dumar ah, waxaana tartankaan soo abaabulay koox la magac baxday “noqo qof fir-fircoon” iyo dowladda.
“Dumarka badan ee ka soo qeyb galay tartanka awgeed ayaa waxa ay guddiga qaban qaabada u ogolaatay in ay kordhiyaan tirada dadka ka qeyb qaadanayo tartanka taas oo markii hore ahayd 30 balse markii dambe la gaarsiiyay ilaa 47 gabdhood,” ayay tiri. Si kastaba ha ahaate, guddiga ayaa weli ku khasban in ay qaar kale oo rajeynayay tartanka laga reebo.
Qof ka mid ah dadka barta Twitter-ka isticmala ayaa yiri ” aniga sheikh diinta ku xeel dheer ma’ihi balse maahan in dumarka ay baaskiil ku dhex wadaan meel shaarac ah oo ay cawradooda u muujiyaan ragga. Haddi ay gabadhu dooneyso in ay baaskiil waddo waa in ay meel aan shaarac ahayn ku waddaa.”
Qofkale ayaa yiri ” shanta ama tobanka sano ee soo socota, dumarka hadda baraha bulshada ku naqdinaya tartanka ay ka qeyb qaadan doonan tartanno kuwaan la mid ah ama ay ka soo xadiri doonan goobaha lagu qabanayo tartannada oo ay taageerayaal noqon doonan.”